Nohasinkasínina ny fandaharan'ny radio Don Bosco mba hanomezana fahafaham-po ny mpihaino azy.
Vao mihiratra dia mampitodika ny mpihaino azy any amin’Andriamanitra ny Radio Don Bosco amin'ny Vavaka Maraina, ny Fandinihantena, fihainoana ny Tenin'Andriamanitra, famakafakàna fohy ny Vaovao Mahafaly, ny Fampianaran'ny Fiangonana momba ny Fiarahamonina, ny Katesizy, ary ny tantaran'ny olomasina.
Samy hafa isanandro ny fandaharana aroson'ny Radio Don Bosco eto amin'ity hasim-potoana ity: araka izay zavamisin'ny andro itsahina, somary atao hanalavoly, fanentanana mailamailaka laroina hatsikana. Mifandimby eto ny lohahevitra isan-tsokajiny (fanabeazana ara-pitiavana, resaka tanora, Kolotsaina sy Fampisehoana, lahadinika momba ny zara-asan'ny vehivavy sy fiainam-pianakaviana, zava-misy...) mba ho fanitaram-pahalalàna ary koa fialamboly. Ampandraisina anjara ny mpihaino sady tarihina haka lesona sy handini-tena (antso an-téléphone, fandraisam-peo ny heviny, lalao).
Miendrika fanentanana toy ny seho an-tsehatra ity ampaham-potoana tolakandro ity. Fotoam-pialamboly, misy lohahevitra maromaro samy mahasoa: mampahafantatra zava-baovao samihafa, mahaliana, torohevitra mamaha ny olana andavanandro. Fandaharana mailamailaka ihany koa, mamalifaly ary mampandray anjara ny mpihaino (raisim-peo izy na mandray anjara mivantana amina lalao an-téléphone).
Fandaharana madinidinika (fohy) kosa no aroso eto amin'ity hasim-potoana ity: momba ny fahasalamana, ny fiainana ambanivohitra, ny tontolo iainana, ny fitaizam-pinoana, ny tokony ho fantatra momba ny tontolon'ny asa.
Ireo fandaharana lehibe fandalinana: resaka sy adihevitra momba ny fiarahamonina na ny pôlitika, fanontaniana mivantana amin'ny pretra momba ny finoana sy fiainam-panahy, Fandalinam-pinoana, Tontolon'ny Vehivavy, Zava-misy atrehina…
Manelanelana ireo hasim-potoana ireo no anolorana ny vaovao mba hahalala ny misy sy marina eo an-toerana misy azy ary eto amin'ny fireneny sy eran-tany ny mpihaino RDB.